Kutenderera Presidential Palace muKabul neTaliban Fighters senongedzo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Afghanistan Kuputsa Nhau » Kutenderera Presidential Palace muKabul neTaliban Fighters senongedzo
Afghanistan Kuputsa Nhau • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Taliban muPresidential Palace
Mutungamiri weTaliban, Mullah Abdul Ghani Baradar akaziviswa semutungamiri mutsva weAfghanistan.
VaTaliban Fighters vari kupa mikana yemifananidzo kuvatori venhau veAl Jazeera vanobva kuhofisi yemutungamiri wenyika kuKabul.
Mutungamiri weAfghanistan, Ashraf Ghani abva kuAfghanistan apo maTaliban anovhara Kabul, sekutaura kwemutungamiriri wenyika murunyararo Abdullah Abdullah.
Al Jazeera TV yanga ichitepfenyura yakasarudzika kubva mukati memuzinda ichiratidza Taliban FIghters vagere muhofisi yemutungamiri wenyika muKabul.
The Embassy yeUS muKabul iri kuraira cirizens yeUS nezve mishumo pamusoro peKabul Airport yanga ichipisa. Zano kumaAmerican rakadzikira muAfghhanistan kuti vagare munzvimbo
Islamic Emirate yeAfghanistan ichaziviswa neTaliban
Iyo Taliban Regime iri kuronga kupa zita Afghanistan kuIslam Emirate yeAfghanistan.
Zvichakadaro United States iri kutumira masoja mazana matanhatu nematanhatu kuAfghanistan, aya anowedzera chiuru kune mazana mashanu atove munzira.
Vatori venhau vanotaura nezveQatar-based news network Al Jazeera vakakokwa nhasi kuzoona Presidential Palace muKabul, Afghanistan. VaTaliban Fighters vaimira muhofisi yemutungamiri wenyika vaine pfuti.
Iko kunoratidzika kunge kune kutya nekutya, asi hapana kudeuka kweropa kwakataurwa muCapital CIty yeKabul nhasi nevarwi veTaliban vachitora kutonga kweguta nekukurumidza kumhanya.
It yakatanga mangwanani Svondo, Nyamavhuvhu 15, ndokuguma usiku. Afghanistan yadzoka pasi pesimba reTaliban mushure memakore makumi maviri uye mamirioni anoshandisa kuvaburitsa kunze.
Kwapera Svondo, zvakaziviswa kuti Ghani akasiya nyika nenhengo dzinoverengeka dzemakurukota ake.
“Vaimbove Mutungamiri weAfghanistan vabuda muAfghanistan. Asiya nyika iri mudunhu iri [Mwari] achamupa mhosva, ”akadaro Abdullah Abdullah, sachigaro weHigh Council for National Reconciliation, akadaro muvhidhiyo yakatumirwa papeji rake reFacebook.
Kupunzika kwehurumende inotsigirwa neWestern muKabul kunouya mukumuka kweTaliban blitzkrieg iyo yakatanga muna Nyamavhuvhu 6 uye yakatungamira kubatwa kwemapurovhinzi anopfuura makumi maviri nemaviri eAfghan neSvondo mangwanani.
Mutungamiri weAfghan Ashraf Ghani atiza Afghanistan kuenda kuTajikistan. Izvi zvinoonekwa sekusada nyika nevanhu veAfghan.
Vakavhiringidzika nyika dzekumadokero dziri kukwikwidza kubvisa vashandi veembassy. Gurukota reUK, Boris Johnson ari kukurudzira nyika kuti dzisatarise Hurumende yeTaliban yeAfghanistan.
Kupererwa: Vanhu vari munhandare yendege vachiedza kutiza Taliban inogara Afghanistan
Kune angangoita 1500 vagari veNepal muAfghanistan. Ministry yeNepal yekune dzimwe nyika yakati Nepal iri kuyedza kuronga kuti ibatsire vagari vayo kuti vasiye Afghanistan.
France yakachinjisa embassy yayo kunharaunda yenhandare muKabul, nepo mishumo yeUS ichiti nhandare yakanga ichipisa uye yakavharwa. Vamiriri veEU vaive vaendeswa kunzvimbo dzisina kuzivikanwa.
BREAKING: Mhirizhonga paKabul Airport muAfghanistan sezvo mazana achiedza kutiza nyika nekukurumidza sezvazvinogona. pic.twitter.com/jwui8bjbFs
- Insider Pepa (@TheInsiderPaper) August 15, 2021
Nyonganiso paKabul AIrport
Madiplomat anomhanya kutiza. Kuonekwa kubva Kumumiriri wePakistan muKabul, Afghanistan
Dhipatimendi reUS State rakaburitsa iyi bvunzurudzo neMunyori weHurumende yeUSA Anthony Blinken neABC News
Antony J. Blinken, Munyori weHurumende
MUBVUNZO: Uye zvino Secretary of State Tony Blinken. Secretary Blinken, maita basa nekujoinha nesu.
SECRETARY BLINKEN: Ndatenda nekuve neni.
MUBVUNZO: Ngatitange nemamiriro ehumiriri hwedu muKabul. Une chivimbo mukuchengetedzeka kwevashandi veAmerica kuembassy kunyangwe maTaliban akakomberedza Kabul?
SECRETARY BLINKEN: Ndiro basa rimwe kwandiri, John. Tiri kushanda kuve nechokwadi chekuti vashandi vedu vakachengeteka uye vakachengeteka. Tiri kuendesa varume nevakadzi veembassy yedu kune imwe nzvimbo kunhandare yendege. Ndosaka Mutungamiriri akatumira mauto akati wandei kuti ave nechokwadi chekuti, sezvatinoramba tichidonhedza huvepo hwedu hwezvematongerwo enyika, tinozviita nenzira yakachengeteka uye yakarongeka uye panguva imwechete tichichengetedza hunyanzvi hwekudyidzana muKabul.
MUBVUNZO: Saka rega ndingova nechokwadi chekuti ndakunzwa nemazvo. Uri kuendesa vashandi kuembassy - zvinoreva here kuti urikuvhara muzinda weAmerica muKabul, chivakwa ichocho chinosiiwa?
SECRETARY BLINKEN: Parizvino, chirongwa chatiri kushanda ndechekufambisa vashandi kubva kumuzinda weamburenzi yeKabul kuenda kunzvimbo kunhandare yendege kuti vaone kuti vanokwanisa kushanda zvakachengeteka uye zvakachengeteka, zvakare kuenderera kuti vanhu vabve kuAfghanistan se tanga tichiita kubva Kubvumbi - kupera kwaApril, Kubvumbi 28. Isu tanga tiri pakarairwa kubva kubva ipapo. Takazviita nenzira yekuziva chaizvo. Isu takagadzirisa zvichienderana nezviri pasi. Ndosaka takave nemauto aripo akatumirwa naMutungamiri kuti vaone kuti tinogona kuzviita nenzira yakachengeteka uye yakarongeka. Asi mukomboni pachawo - vanhu vedu vari kusiya ipapo uye vachienda kunhandare.
MUBVUNZO: Gwaro remukati rakaburitswa nevamiriri veEmbassy neChishanu rakaraira vashandi vekuAmerican kumuzinda kuti vadzikise huwandu hweruzivo rwepfuma, uye rikati, "Ndapota… sanganisira zvinhu zvine mamishinari kana marogo emumiriri, mireza yeAmerica, kana zvinhu zvinogona kushandiswa zvisirizvo mukushambadzira. ” Saka zviri pachena kunetsekana apa ndekwekuti maTaliban - uye izvi zvakare, ndinofungidzira, nei uchiendesa vanhu kunhandare yendege - kuti maTaliban angakurira nekutora nzvimbo yemumiriri.
SECRETARY BLINKEN: Aya maitiro akajairika ekushandisa mune chero mamiriro akadaro. Pane zvirongwa zviripo kana isu tiri kusiya mubatanidzwa wemumiriri, kutamisira vanhu vedu kune imwe nzvimbo, kutora ese iwo matanho, iwo awakatonyora. Saka izvi ndizvo chaizvo zvataizoita mune chero eaya mamiriro, uye zvakare, izvi zviri kuitwa nenzira ine hungwaru, zviri kuitwa nenzira yakarongeka, uye zviri kuitwa nemauto eAmerica ikoko kuti tive nechokwadi chekuti tinogona kuzviita. nenzira yakachengeteka.
MUBVUNZO: Nenzira yekuremekedza, kwete zvakawanda nezve izvo zvatiri kuona zvinoita kunge zvakarongeka kana zvakajairika mashandiro. Mwedzi wapera chete, Mutungamiri Biden akataura kuti pasina mamiriro ezvinhu - uye aive ake - anga ari mazwi ake - pasina mamiriro ezvinhu vaive vashandi veUS, vashandi veembassy vanoburitswa nendege kubva muKabul mukudzokororwa kwezviitiko zvatakaona muSaigon mu1975. Saka handizvo here izvo zvatiri kuona izvozvi? Ndiri kureva, kunyangwe iwo mifananidzo anokurudzira izvo zvakaitika muVietnam.
SECRETARY BLINKEN: Ngatitorei nhanho kumashure. Izvi zviri pachena kwete Saigon. Chokwadi chenyaya ichi ndeichi: Takaenda kuAfghanistan makore makumi maviri apfuura nehumwe chinangwa mupfungwa, uye kwaive kubata vanhu vakatirwisa musi wa20 / 9. Uye iro basa rakabudirira. Takaunza bin Laden kururamisiro makore gumi apfuura; al-Qaida, iro boka rakatirwisa, rakadzikira zvakanyanya. Kukwanisa kwayo kutirwisa zvakare kubva kuAfghanistan kwave - izvozvi hakusipo, uye tichave nechokwadi chekuti tinochengeta munzvimbo yacho kugona, masimba anodikanwa kuti aone kumisazve kutyisidzira kwegandanga uye kukwanisa kubata nazvo. Saka maererano nezvatakatanga kuita muAfghanistan, takazviita.
Uye zvino, nguva dzese, Mutungamiriri aive nesarudzo yakaoma kutora, uye danho iri raive rekuita nemauto akasara atakagara nhaka patakasvika kuhofisi yaive muAfghanistan, riine nguva yakatarwa yakatangwa nevekare manejimendi kuti ivawane. kunze naMay 1. Ndicho chisarudzo chaakaita. Isu tanga tiri muAfghanistan kwemakore makumi maviri - $ 20 tiririyoni, 1 hupenyu hweAmerica hwakarasika - uyezve, nekutenda, takabudirira kuita izvo zvatakaisa pakutanga. Mutungamiri vakaita kutsunga kuti yakwana nguva yekupedza iyi hondo yeUnited States, kubuda pakati pehondo yevagari muAfghanistan, uye kuona kuti tiri kutarisa zvido zvedu pasirese, kutenderera pasirese. uye kuti isu takagadzirirwa kusimudzira izvo zvido. Ndo zvatiri kuita.
MUBVUNZO: Asi Mutungamiriri akarayirwa zvakare nevarairidzi vake vemauto, sekunzwisisa kwangu, kuti vasiye huto munyika yevarwi vemauto anosvika zviuru zvitatu kusvika mazana mana. Pane here iko kuzvidemba izvozvi kuti haana kutora zano iri, iwo mazano evakuru vemauto varairidzi, kusiya vamwe varwi muAfghanistan?
SECRETARY BLINKEN: Heino sarudzo yakasangana neMutungamiri. Zvekare, yeuka kuti nguva yakatarwa yakagadzwa neyaimbova manejimendi aMay 1 kuti mauto edu akasara abude muAfghanistan. Uye zano rekuti isu tingadai takatsigira chinzvimbo quo nekuchengeta mauto edu ipapo ini ndinofunga zvakashata, nekuti izvi ndizvo zvaizoitika kana Mutungamiriri akafunga kuchengeta iwo mauto ipapo: Munguva kubva panguva yakasvika chibvumirano kusvika Chivabvu 1, maTaliban aive amira kurwisa mauto edu, akamira kurwisa mauto eNATO. Yakanga yakabatirirawo pachigumburo chikuru ichi chatinoona ikozvino kuyedza kutora nyika, kuenda kumakuru makuru emapurovhinzi, ayo mumasvondo apfuura akabudirira kuita.
Uyai Chivabvu 2, dai Mutungamiriri akafunga kugara, magirovhosi ese angadai akabviswa. Tingadai takadzokera kuhondo neTaliban. Vangave vairwisa mauto edu. Tingadai takave nemazana maviri nemakumi mashanu emasimba kana zvakadaro asara munyika nesimba remhepo. Ini handifunge kuti izvo zvaizokwana kubata nezvatiri kuona, zvinova zvinosemesa munyika yese, uye ndinenge ndiri pachirongwa ichi panguva iyoyo pamwe ndichifanirwa kutsanangura kuti sei taitumira makumi ezviuru anomanikidza kudzokera kuAfghanistan kuenderera mberi nehondo iyo nyika inofunga kuti inoda kupera mushure memakore makumi maviri, $ 2,500 tiririyoni, uye 20 hupenyu hwakarasika, uye kubudirira mukuzadzisa zvinangwa zvatakaisa patakapinda pakutanga.
MUBVUNZO: Rega ndikuratidze chimwe chinhu chakataurwa naMutungamiri Biden kutanga kwegore rino paakabvunzwa nezve tarisiro yezviri, chaizvo, zvatiri kuona izvozvi, kutorwa kweTaliban kweAfghanistan:
"Mukana uripo wekuti kuve neveTaliban vanokunda zvinhu zvese nekutora nyika yese kashoma."
Saka akarasiswa nemasangano ake enjere? Haana kuvateerera? Sei akange akanganisa kudaro?
SECRETARY BLINKEN: Zvinhu zviviri. Akadaro uye isu tataura nguva yese kuti vaTaliban vaive muchinzvimbo chesimba. Patakasvika kuhofisi, maTaliban aive pachinzvimbo chakasimba chero nguva kubva 2001, sezvo yaive yekupedzisira musimba muAfghanistan pamberi pa9 / 11, uye yakakwanisa kuvaka kugona kwayo mumakore mashoma apfuura mune nzira yakakosha. Saka icho chinhu chatakaona nekufanoona.
Tataura izvozvo, maAfghan Security Forces - Afghan Security Forces iyo isu takaisa mari mairi, iyo nharaunda yepasi rose yakaisa mari mukati memakore makumi maviri - ichivaka simba re20, ichivagadzirira, vakamira neuto remhepo ravaive naro ivo vaTaliban yakanga isina - iro simba rakaratidza kuti raisakwanisa kudzivirira nyika. Uye izvo zvakaitika nekukurumidza zvakanyanya kupfuura zvataitarisira.
MUBVUNZO: Saka izvi zvinorevei kumufananidzo weAmerica munyika uye nezvakataurwa nemutungamiri Biden zvine simba, kudiwa kwekumiririra demokrasi uye hunhu hwegutsaruzhinji, kutiona tichisiya neboka remhirizhonga richiuya richitora masimba. iyo inoda kuvhara kodzero yevasikana yekuenda kuchikoro, kuri kuuraya varwi vanozvipira, izvo zvinongova zvinomiririra izvo zvehutongi hwehunhu izvo Mutungamiriri Biden akataura kuti United States inofanira kumiririra?
SECRETARY BLINKEN: Saka ndinofunga pane zvinhu zviviri zvakakosha pano. Kutanga, ndinodzoka kune ichi chirevo chekuti maererano nezvatakaronga kuita muAfghanistan - chikonzero isu tanga tiripo pakutanga, kubata nevaya vakatirwisa musi wa9 / 11 - takabudirira kuzviita. Uye iwo meseji yandinofunga inofanirwa kurira zvakanyanya.
Ichokwadi zvakare kuti hapana chinhu icho isu vanokwikwidza makwikwi kutenderera pasirese vangade zvinopfuura kuona isu takabirirwa muAfghanistan kwemamwe mashanu, gumi, kana makumi maviri emakore. Izvo hazvisi mukuda kwenyika.
Chimwe chinhu ndecheichi: Kana tichifunga nezvevakadzi nevasikana, vese avo vakave nehupenyu hwavo hwaenda kumberi, uku kusimuka. Izvo zvinhu zvakaoma. Ini ndakasangana nevanoverengeka veava vakadzi vatungamiriri avo vakaitira zvakawanda nyika yavo uye vakadzi nevasikana muAfghanistan mumakore makumi maviri apfuura, kusanganisira munguva pfupi yapfuura saApril pandakanga ndiri muKabul. Uye ndinofunga izvozvi zvakafanira kune vekunze nzanga kuti vaite zvese zvatinogona kushandisa chishandiso chese chatinacho - hupfumi, vamiriri, vezvematongerwo enyika - kuyedza kutsigira zviwanikwa zvavakawana.
Uye pakupedzisira zviri mukuzvifarira kwevaTaliban - vanofanirwa kuita kutsunga, asi kuri mukuzvifarira kwavo kana vachitsvaga kugamuchirwa, kuzivikanwa kwenyika dzese; kana vachida rutsigiro, kana vachida kuti masanctions abviswe - zvese izvi zvinoda kuti vatsigire kodzero dzakakosha, kodzero dzakakosha. Kana vakasadaro uye kana vari muchinzvimbo chesimba uye vakasadaro, saka ndinofunga Afghanistan ichava pariah nyika.
MUBVUNZO: Munyori weHurumende Tony Blinken, ndinokutendai zvikuru nekubatana nesu mangwanani ano.